Miriyoni Dhora Wiki Makwikwi kubva kuna John Chow dot Com | Martech Zone
Iyo Miriyoni Dhora Wiki Makwikwi kubva kuna John Chow dot Com
Muvhuro, Nyamavhuvhu 13, 2007 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
John Chow dot Com yakabata humwe huipi blog makwikwi. Arikupa 24-wide screen LCD monitor uye nekopi yakasainwa yebhuku rinotengesa zvakanyanya, Iyo 4-Hour Workweek! Tsvaga maitiro ekupinda pano. Makwikwi acho ari kutsigirwa ne Iyo Mamirioni Dhora Wiki. Shandisa coupon kodhi JohnChow kuchengetedza $ 10 pane peji.
Nhasi manheru ndakatenga peji "Email"… ndakashamisika kuti yakavhurwa! Ini ndakakuvadza kubhadhara $ 100 madhora kune iyo peji nekuti ini ndakanganwa kuisa iyo coupon kodhi. Ini ndakanyora vatengesi ndikavaudza kuti ini ndaisada iyo $ 10, asi ini ndinoda izvo zvinowedzerwa mumakwikwi aJohn !!!
Inopfuura $ 9,000 muna Chikunguru!
Cherekedza kuna John Chow: Mwedzi wapera ndakagadzira $3,300 pane ino blog nekutenda kuraira kwako uye nekuwedzera imwe $6,000 muzvibvumirano zvekuvandudza zvandaigona kunongedzera kublog rangu. $ 2,700 yemadhora zviuru mazana matatu nemazana matatu yaive 'yakaipa' asi zvakabatsira kubhadhara kugadziridza mota kwemwanakomana wangu uye komputa iye achienda kukoreji. Ndatenda, John!
Email ROI: Iyo Hapana Brainer yeiyo Huru Corporation
Aug 13, 2007 na10: 52 PM
Ini chokwadi ndinoshuva kuti dai ndaiziva kuti iro gehena randiri kutadza kana zvasvika kune iyi AdSense nzombe .. Ndine rombo rakanaka kana ndiri kugadzira kunyange padyo ne50cents pazuva .. kazhinji iri zilch
Google haiite izvozvo zvakanaka pane yangu saiti. Ungangoda kuyedza kuomesa mashambadziro kuyerera nezvako pane kuti uve nemavara ekumashure akasiyana nemuganhu.
Ini handikwanise kurangarira kwandakamboiverenga asi vanhu vanonyanya kudzvanya-kuburikidza kana vasingafunge kana chiri sekushambadzira kuri pachena. Ndosaka kushambadza kwemanyorerwo kuchiwanzo kuve nekukenya kwakawanda kupfuura kushambadzira kwemufananidzo.
Zvakare - ichi chaive CHIKURU, kunze kweyakajairika, mwedzi. Ndinoda kuti ive yakajairika!
Mamirioni emadhora peji rekutanga
Ini chaizvo ndawana peji rako ndichitsvagisisa nezve Million Dollar Wiki. Shure kwaizvozvo ndanyorera kune chako chikafu;)
Iyo MDW idanho rinokwira kubva kune MDHP maererano nekupa kupihwa zvirinani uye zvakare maererano nemutengo. Ini ndinofunga yekutanga buzz uye yazvino buzz kubva kuna John Chow ichawedzera saiti ino kuva muonekera zvakakwana kuti ibvumidze kuti ikure pasi payo pachayo kukurumidza.
Ndinofara kuva newe pano! Ini ndinobvumirana newe nemoyo wese pane pfungwa uye kuurayiwa!
Ndatenda nekupindura uye ndinofara kuti iwe wanyorera!